Maamulka Gobolka Nugaal oo Waxgarad u Diray Deegaanka Qoriley – Radio Daljir
Seteembar 26, 2015 5:07 b 0
Sabti, September 26, 2015 (Daljir) —Mamulka Gobalka Nugaal ayaa sheegay inay wadaan dadaalo xoogan oo lagu qaboojinayo dirirta ku dhexmartay beelo walaalo ah deegaanka Qoriley iyo Cagaarre oo ka kala tirsan gobaladda Nugaal iyo Sool.
Gudoomiyaha Gobalka Nugaal Mudane Cumar Cabdilaahi Faraweyne iyo wafdi uu hoggaminayo ayaa qayb ka ah wafdiga madaxwayne ku xigeenka ee degmada Burtile u aaday daminta xiisada colaadeed, Faraweyne oo la hadlayay Telefeshinka Somalilchannel ayaa sheegay inay u howlgaleen sidii dagaalka loo joojin lahaa, ayna ergo howshaasi loo xilsaaran aadi doonto goobihii lagu dagalamay ee Qoriley ka mid ahayd.
Dagaalka beelaha dhexmaray ayuu sheegay inta ay ka og yihiin inay ku dhinteen 17-qof oo labada dhinac ee is dagaalamay sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo.
Waxa uu Gudoomiyaha Gobalka Nugaal ku baaqay in colaada dagaalka la socota la joojiyo oo nabad iyo walaaltinimo lagu wada noolaada.
Dagaalka Qoriley iyo Cagaarre ayaa ka dhashay dhul- daaqsimeed, waana meelaha ugu badan dadka Soomaaliyeed colaad ku dhexmarto.